नारायणकाजीको नैतिकतामा पूर्णविराम ! करोडाैँको वार्तालाप सहितको भिडियो बाहिरियो - Onlines Time
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको नैतिकतामा पूर्णविराम लाग्नेगरी एउटा करोडाैँको वार्तालाप गरेको भिडियो बाहिरिएको छ। श्रेष्ठकै कारण कसैको जीवन वर्वाद भएको विषय समेतसँगै बाहिरिएको छ ।
नारायणकाजीले सुसन कर्माचार्य मार्फत कामनसिंहलाइ आर्थिक रूपमा जर्जर पारेको कुराकानीबाट प्रस्ट हुन्छ । यसमा नारायणकाजीले प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ । यद्यपी भिडियोले नै धेरै कुरा बोलिसकेको कारण नारायणकाजीको प्रतिक्रियाले त्यति ठूलो अर्थ राख्ने अवस्था छैन । त्युअघि कमानसिंहले श्रीमतिलाइ समेत धोका दिएको भन्दै किरिया नगर्न र आफ्नो जुठो नबार्न भन्दै सार्वजिनक अपिल समेत गरेका थिए । उनको अहिले अहिले समाजिक सञ्जालमा सयौँले सेयर गरिरहेका छन ।
लामाको परिवारले सनराइज खबरमार्फत बाहिर ल्याएको भिडियो तल हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ
नेपालका प्रसिद्ध हास्य कलाकार मनोज गजुरेल विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । करिब तीनवर्ष अगाडि मीना ढकालसँगको २२ वर्ष लामो सम्बन्धलाई अन्त्य गर्दै सम्बन्ध बिच्छेद गरेका मनोजले पुनः विवाह गर्ने तयारी गरेका हुन् । हामीले राखेको जिज्ञासामा गजुरेलले आफू विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको पुष्टि गरे ।
उनले भने “केही समय पछि म विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको कुरा साँचो हो । तर कोसँग, कहाँ र कहिले अहिले खुलाउँदिन,” गजुरले कुराकानीमा भने, “केही महिना अझै लाग्छ । घरायसी व्यवहारिक कुराहरु मिलाउँन बाँकी छ । एक–दुई महिना पछि मात्रै विवाह हुन्छ ।”उनले पूर्वी नेपालमा विवाह गर्न लागेको जानकारी दिए । मनोज लोकप्रिय हास्य कलाकार हुन् ।
Prevबिचरी सियोना श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा फेरी समस्या देखियो ! सके सहयोग नसके सेयर गराै
Nextसिउदोभरी सिन्दुर र रातो चुरापोतेमा धपक्कै बलेकी श्वेता (फोटो/भिडियो सहित)